हृ’दयघा’तबाट जोगिने यी हुन् पाँच प्रभावकारी उपाय-बिधि ! – Life Nepali
हृ’दयघा’तबाट जोगिने यी हुन् पाँच प्रभावकारी उपाय-बिधि !
काठमाडौँ। आजकल मानिसको दैनिक जीवनको परिवर्तनसँगै धेरै मानिसमा हृ’दयघा’त हुने गरेको छ । वि’श्व मु’टु महासंघका अनुसार मुटुरोगका कारण विश्वभर बर्सेनि १ करोड ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२० सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मु’टुरोग म’हामारीकै रूपमा फैलिने भ’विष्यवाणीसमेत गरेको छ । मु’टुरोगमा हृ’दयघा’त प्रमुख हो । मु’टुका मांशपेशीमा र’गत प्रवाह गर्न कोरोनरी र’क्तनलीहरू साँ’गुरो वा बन्द हुनाले रो’ग लाग्ने गर्दछ । ह्य’दयघा’त पनि एक प्रकारको कोरोनरी मु’टुरो’ग नै हो ।
हृ’दयघा’तबाट बच्ने यी हुन् पाच मुख्य उपायहरु:
(१) एक्कासी छा’ती दु’ख्न थाल्यो भने एक चक्की एस्पिरिन चपाउँदै अस्पताल जानुभयो भने हृ’दयघा’तबाट हुने मृ’त्यु’ टर्न सक्छ । तत्कालै लिन सकिएको ३०० मिलिग्रामको एउटा एस्पिरिनको सहयोगबाट करिब एक चौथाई मृ’त्युलाई टा’र्न सकिन्छ । सबै प्रकारका ” छाती’दुखाई हा’र्ट एट्याक नभए पनि एस्पिरिन खाँदा स्वा’स्थ्यलाई कुनै घा’टा हुँदैन ।
(२) शा’रीरिक तौल ठीक राख्ने, स’कारात्मक चिन्तन राख्ने, पारिवारिक वातावरणमा बस्ने, चिन्ता नलिने साथै जंक फूड नखानाले पनि हृ’दयघा’तबाट बच्न सकिन्छ । (३) शा’रीरिक ब्यायाम : दैनिक आधाघण्टा शारीरिक कसरत र व्यायाम गरेमा हृ’दयघा’तको सम्भावना टरेर जान्छ ।
(४) नशाबाट टाढा : धू’मपानका साथै सू’र्तिजन्य पदार्थको से’वन नगर्दा हृ’दयघा’तको सम्भावना कम हुन्छ । सूर्ति, तम्बाखु, चुरोट, सिगार वा खैनी सेवनकर्तामा हृ’दयघात हुने सम्भावना हुन्छ । (५) स्वस्थ भोजन : प्रशस्त फलफूल, हरियो सागसब्जी खाने, तारेको खाना नखाने, चिनी, नून र चिल्लो सकेसम्म कम खाने ।
Next जति थो’रै सुतिन्छ: उति छि’टो म’रिन्छ – जनचेतनाको लागी सेयर गरौ !